Kedu ka esiji HGH - Genotropin HGH ntụziaka ka esi eme ogwu
Site HGH Thailand February 07, 2018
Genotropin - bu ihe puru iche nke hormone nke na-eto eto na Thailand na mba ndi ozo, emeela onwe ya dika ihe di mma ma di mma.
Kedu otu esi egbochi hormone na-eto eto?
Agachaa gị arụ ọrụ na HGH pen dozie onodi ogwu gi, ị nwere ike ịmalite injecting
- wepu okpu mkpuchi site na agịga
- ihe niile dị njikere maka ogwu, a na-eji aka dị ọcha eme ihe ahụ na-etinye aka na mmanya
- Ọrụ nke injecting hormone growth in the skin into the fat layer (ọ bụghị ahụ ike)
Cheta! Ị nwere ike iji ebe ọ bụla na ahụ (buttock, leg, stomach or shoulder)
- Na - esote, ịkwesịrị ịbanye na agịga na omimi nke 5 millimeters, ị nwere ike ime n'akụkụ aka nri ma ọ bụ mkpọda - dika dị na foto
- Biko echegbula onwe ya, agịga ahụ dị ezigbo mkpa, ọ dịghị afụ ụfụ
- Naanị pịa bọtịnụ ma jide 5 sekọnd
Njikere! ọ dị nnọọ mfe site na enyemaka nke injections nke hormone growth, ị na-eto eto ma na-enwekwu ume kwa ụbọchị
Mee ibu hormone ugbu a pịa ebe a!
ekele maka ntụziaka doro anya